Windows ekwensu, mana otutu ji ya Site na Linux
Windows ekwensu, ma ọtụtụ ndị na-eji ya
Ee, mgbe ị banyere webusaiti Linux, onye ọ bụla na-ekwu okwu ọjọọ banyere Windows, nkewa, nje, na ọ jọgburu onwe ya, na ọ bụ nke ya na otu puku ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe ihere na mgbe ahụ ndị na-eti mkpu na mbara igwe banyere ihe ọjọọ nke Windows, NSA na alaeze nke ihe ọjọọ, na-abụkarị ndị mbụ (ọ bụghị mgbe niile, mana n'ọtụtụ ọnọdụ) ịnwe boot abụọ na n'ezie, na nnukwu ihu abụọ a, Ha nwere ike ichepụta otu puku ngọpụ, na ọ bụrụ na ọ bụ maka ọrụ, na ọ bụrụ na ọ bụ maka egwuregwu, na ọ bụrụ na ọ bụ maka Photoshop.
Ọtụtụ oge ndị na-ekwu na ọ bụ n'ihi egwuregwu, bụ otu ihe ahụ na forums na Linux nrụọrụ, ha kwuru na ọ bụrụ na Steam ebu Dota 2, na ha agaghị eji Windows ọzọ (ụgha!).
Omume ihu abụọ nke a na-eku ume na gburugburu ebe a dị oke mma, inye nnukwu ihe atụ, otu ndị ahụ na-eti mkpu na mbara igwe banyere ikikere Windows, wee zụta iPad, iPhone ma ọ bụ Apple Gadget ọ bụla, na-echetara m ndị ahụ ndị mmadụ na - agwa gị ihe ị ga - eme ma ha anaghị eme ya (dị ka ọtụtụ ndị ji okpukpe kpọrọ ihe).
M na-arịọ ndị mmadụ ka ha dịrị n'otu, ọ bụrụ na ị na-eji Windows, biko agwala anyị na ịkwesighi iji ya, ọ bụrụ na ị na-eji Ngwaọrụ Apple, abịakwala ịkụziri anyị okwu dịka Stallmanian nwere nghọta banyere uru nke nnwere onwe ma nye anyi ahuhu site na ntigbu LPG.
Nwoke abụọ "mkpụrụ obi" bụ fickle n'ụzọ ya niile kwuru otu akwụkwọ ochie, na-ebi ma ka ndụ na-agbanwe agbanwe na omume gị, adịghị achọ n'aka ndị ọzọ, ihe ọbụna na ị nwere ike ime.
Emechara, ana m ewepu okpu m nye ndị jisiri ike na-enweghị ngwaọrụ ndị a niile ma na omume ha na okwu ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Windows ekwensu, ma ọtụtụ ndị na-eji ya
Ihe 83 kwuru, hapụ nke gị
M na-eji Linux, Anaghị m eji windo maka na ọ bụ eziokwu na anaghị m akpọ egwu ma ọ bụ ọ bụrụ na m na-anwale nkesa ndị dị ọtụtụ nke m nwalere 10%
… Na na na na na na na…
Ndị ọrụ ahụ ị na-akatọ nwere ike ịgwa gị ugbu a, n'ihi na ha nwere ikike ọ bụla iji Ngwa ọ bụla ha chọrọ, ọbụlagodi na ihu abụọ ha mechara nye ha ohere ikwusa na Windows ma ọ bụ Apple bụ ekwensu. You cheghi enyi?
Ka o sina dị, ana m aghọta nkatọ gị na nke mbụ ana m asọpụrụ echiche gị. Abụ m otu n’ime ndị ọrụ jisiri ike dịrị na-enweghị Windows na kọmputa ha ihe karịrị afọ 7. Na ọrụ m nwere PC nwere sọrọ buut na gịnị kpatara ịgha ụgha? M na-abanye na Windows iji kpọọ NFS, Hawks na ihe ndị yiri ya. Anaghị m ewepụ Windows n'ihi na PC si na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ka nke ahụ na gịnị kpatara itinye Windows paireti ọzọ na ya ma emechaa?
Ka o sina dị, onye ọ bụla na-eme mkpọ ahụ ha chọrọ na akpụkpọ anụ ya.
N'ikwu eziokwu, amaghị m ihe post a bụ, gịnị bụ ebumnuche ya, iji mepụta ire ọkụ?
Pandev, dokwuo m anya mgbe ahụ ... ọ ga-abụrịrị na ebe m jiri ụtụtụ hie ụra, ọ dị m nwayọ nwayọ taa.
O doro anya na ọ tara ahụhụ mgbe nsogbu doro anya ya na ndị ọrụ GNU / Linux jiri Windows hahaha.
Ma blọọgụ onwe onye bụ maka trauma, ma ọ bụ? 🙂
Hahaha ezigbo eziokwu, post ahụ anaghị enye aka ọ bụla bara uru karịa ibipụta nsogbu ya
Kedu ihe ọ na-abịa? Ọfọn, dị mfe, lee, ọ na-ejupụta na mgbochi Windows na nkwupụta Apple na-ekwu mgbe niile na ọ nwere nwamba 4 na-anaghị eji ya, ọ bụrụ na ị ga-eji ya, egbula ndị ọzọ.
Na-ekwu site na Windows? 🙂
Dika post a dighi isi dika ndi n’eme ka uwe Open Open ma jukwa ajuju ka esi eji MS Office ha na mmanya. .. dị ka ọ na-ekwu. nna ukwu, oke niile dị njọ ... ikpe m dịka ọmụmaatụ, abụ m onye na-akwado 2 nke eserese eserese nke ndị na-atụ egwu egwu kpọrọ asị (Metro site na mmeri 8 na Unity si Ubuntu) ma ha nwere ọtụtụ ihe ngọpụ iji nọgide na-eji ha ... Ọ masịrị m Apple ngwaọrụ na ụdị nke Daddy Jobs hapụrụ ha, ọkachasị ndị nọ na tebụl ... Enwere m egwuregwu vidio na ihe egwu ... mana n'ikpeazụ anaghị m nwee mac ... ma ọ bụ merie, ma ọ bụ ubuntu (nke ọma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) ... M na-ejikwa ụlọ ọrụ dell m na elementrị os jikwaa ... amen hahahaha
Echere m na e nwere ọgba aghara taa, mana ọ dị ka ha alaghachila ọrụ.
Enwere m Debian n'ụlọ, mana na-arụ ọrụ na kọmpụta nke na-abụghị nke m enwere Windows 7 arụnyere nke m ji arụ ọrụ, n'ụlọ m na kọmputa m na-ezere ya, ọ bụrụ na oge ụfọdụ m ga-arụ ọrụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ọ dabaghị Enweghị m ihe ọzọ ma ọ bụghị iji ngwa ọrụ aka, ihe m na-eme bụ ijikọ site na VPN na kọmpụta ọrụ site na ụlọ ma rụọ ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Otu ihe bụ ihe anyị chọrọ ịnwe na ihe ọzọ bụ ihe anyị ga - enwerịrị, n'ọtụtụ ọnọdụ, anyị ga - eji ngwa ọrụ dịka iwu azụmaahịa, dịka ọmụmaatụ faịlụ ndị emere na LibreOffice dakọtara na Okwu Microsoft mana ọ bụghị 1005 dị mwute.
M na mgbe kemgbe a nnukwu ofufe nke mbuaha agbanwe agbanwe, n'ihi na m na-eche na n'ikpeazụ ị ejedebe na niile drawbacks na onye ọ bụla nke uru. Ozugbo ị banyere Linux, ọ na-esiri m ike iche maka iji Windows ọzọ. Na na o were m ọnwa 3 ka ọ bụrụ onye 'edozi' onye ọrụ, mgbe m tinyesịrị kọmputa m ọtụtụ oge ma degharịa ọtụtụ distros. Ugbu a, ahụla m ọkụ ma enwere m obi ụtọ na Ubuntu m, ọ na-adị ngwa ngwa ma kwụsie ike ma enwere m ike ịnweta ngwaọrụ ndị ọzọ m chọrọ. Ekwetara m na agbahapụla m na egwuregwu AAA, mana enwekwaghị m oge maka nke a ma enwere m ike iji ndị emulators NDS na PS2. Ntụle, n'agbanyeghị ọkụ na onyinyo, dị mma. Ugbu a, enwere m ike iji ezi uche kwuo na ee, Linux ka mma OS
Post na-achọ ọkụ ọkụ arụ ọrụ. Ọ bụ eziokwu na ọ dị m ka ọ bụ ọkwa ọzọ na-anaghị eso isiokwu nke blog ahụ, agbanyeghị na m na-asọpụrụ ọdịnaya ya na onye dere ya, na mgbakwunye na ikwenye n'akụkụ ụfọdụ nke ọdịnaya ya, ọ dị m ka ọ bụghị ụdị ma ọ bụ ebe ahụ.
M nwere n'ụlọ m ụlọ ọrụ 3 netbook na desktọọpụ na sọrọ buut. Na ụkpụrụ m arụnyere ya dị ka nke a ma ọ bụrụ na achọrọ m mmemme ụfọdụ, mana mgbe m hụrụ ihe m hụrụ n'oge na-adịghị anya, m ga-ahapụ ìgwè abụọ ahụ Anwansi 4, nke dịlarị na ụzọ ziri ezi. Na ọrụ ọ ga-ekwe omume na anyị lere anya na Linux iji rụọ ọrụ na sava ndị dịpụrụ adịpụ, n'ihi na ikikere bara uru ma dị ka nke a si dị na ihe onye ọrụ nkịtị na-eme, Linux na-enweta ma na-ezu ndị ahịa.
Rlaịja RM dijo
99% nke oge m na-eji Linux, anaghị m akwado iji Windows na m na-akatọ ndị na-anataghị ikike ya, mana enwere m boot abụọ na Windows (mbụ) na Linux. N'okwu m, enwere m Windows n'ihi na abụ m onye nrụpụta ngwa ikpo okwu na egwuregwu ụfọdụ anaghị eso mmanya.
Anaghị m ahụ ebe ihu abụọ dị, mgbe ọ bụla mmadụ jụrụ echiche m, m ga-agwa ha na Windows abụghị ezigbo nhọrọ, na ha na-eji Linux mgbe ọ bụla enwere ike ma hapụ Windows maka ikpe ndị enweghị ụzọ ọzọ.
Echefula na ọ bụ echiche m, ọ bụghị sacrilege iji Windows.
Zaghachi Elías RM
pandev92 amaghi m gi onwe gi mana ihe i dere bu eziokwu dika ulo uka ma m debanyere aha nke ederede gi. Ihe i dere di nkenke ma nkenke ma tinye nkpisi aka gi na nsogbu a.
M na-agbasi mbọ ike na ihe ị na-ede na kọmputa m, ọ bụ ezie na m bụ onye ọrụ novice, anaghị eji Windows naanị ma ọlị. Ana m agbalị ịmụ GNU / Linux ma m na-eji ọrụ ndị a.
Ọ na - eme na kọmpụta ụlọ ọrụ na - eji ihe siri ike nke a nwalere ma mee maka Windows na n'ezie, mgbe ịzụrụ kọmputa ị nweghị nhọrọ karịa ịzụrụ Windows na mgbe ị kwụrụ ụgwọ maka ikike ọ bụghị okwu ịtụfu ya. Maka nke a, mgbe m ga - azụta kọmpụta, azụrụ m otu ya nwere ya na enweghị m nsogbu na ya. Ekwenyere m na m na-agbanwe agbanwe na ihe m na-eche banyere nanị.
Kedu ụdị ntinye bụ ihe a? Echere m na nke a bụ blog banyere GNU / Linux, ọ bụghị ịkatọ ndị mmadụ maka ihe ha na-eme maọbụ na ha anaghị eme.
Abụ m onye ọrụ Windows na GNU / Linux na m na-ekwukarị na ị ga - eme na - enweghị Windows otu o kwere mee, mana oge ụfọdụ ị nweghị ike.
Ọ bụrụ na mmadụ ekpebie ịkwado GNU / Linux na onye ọ bụla mgbe ị na-eji Windows, olee nsogbu?
Biri ma hapụ ndụ? Ọfọn, ị kwesịrị itinye akụkọ ahụ n'ọrụ ma bụrụ otu ihe n'ihi na ihu abụọ gị na-esi ebe a. Ikwe ka ndị ọzọ dịrị ndụ pụtara ịhapụ ọrụ ha ma mee ka ha mee ihe masịrị ha.
Eziokwu bu na amaghi m otu I siri kwe ka edeputa ihe ndia. Aghọtara m na e nwere ndị edemede dị iche iche, mana ịgụ echiche na nkatọ na-enweghị isi, enweelarị ikwu. Enwere m olile anya na ihe nzuzu a anaghị aghọ ihe oge niile n'ihi na ị ga-eme ka otu n'ime blọọgụ ole na ole gbasara GNU / Linux na Spanish ghọọ nsị.
Enwerela m "Linux" ogologo oge, echere m na ọ bụ ụdị izizi iji RedHat 5, ọ ga-efu m nnukwu ihe iji wụnye ya na anaghị m akwagharị ya ruo mgbe fedora pụta. Ọ bụ ezie na m na-enwekarị igwe Windows dị iche na egwuregwu, ndị Linux Team jiri ya mee njem na ịnwale.
mgbe m gara ịmụ sayensị kọmputa otu ihe ahụ bụ kọmputa nwere Linux (desktọọpụ), na kọmputa nwere windo nwere egwuregwu, VS Studio SQL Server, nke bụ ihe ha jụrụ anyị na mahadum.
Mgbe m zụtara laptọọpụ mbụ m, o nwere windo abụọ vista + Ubuntu (ọ bụ naanị ya na-arụ ọrụ na wifi n'oge ahụ) mgbe ahụ, ike gwụrụ m ngwa ngwa ọ na-arụ ọrụ naanị na windo windo.
Mgbe m malitere ịrụ ọrụ na sistemụ, ejiri m centos na sava, na desktọọpụ m jiri Windows. otu akụkọ ochie ochie ahụ 🙁
N'ime ọrụ m dị ugbu a anyị bụ onye mmekọ Microsoft nke mere ha nyere m Lumia 800 nwere ekwentị windo na m nwere igwe lenovo e431 nwere windo 8.1 (tupu m enwe lenovo x200 (obere nwere ọdụ ụgbọ mmiri, anaghị m echeta kpomkwem nlereanya) na windo 7). Ihe iseokwu a bụ na n'ihi ọnụ ọgụgụ desktọọpụ dịpụrụ adịpụ, 95% nke Windows na Cisco VPN netwọk. Ana m ejikarị mmemme Shrew abụọ eme ihe maka vpn (ọ bụkwa maka Linux na OSX 🙂 ọ na-ejikọ karịa otu vpn n'otu oge ọ dị ịtụnanya) okwu a bụ onye ahịa RDP. Ana m eji Terminx Codeplex ugbu a. O nwere ihe m chọrọ. Ihe omume a nwere paswọọdụ nnabata, enwere m ike itinye nzere niile wee mepụta igwe m họrọ akara ntinye abanyeburu na m nwere ike itinye mkpado na njikọ ahụ. Nsonaazụ dị mma ma dị mma, ọkachasị mgbe ị nwere ọtụtụ vpn, azure, rackspace, amazon. wdg. na mgbakwunye na iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihuenyo niile ozugbo i wepụrụ menus, jiri taabụ iji gbanwee site na desktọọpụ gaa na nke ọzọ dị mma na ọtụtụ ohere iji rụọ ọrụ.
ihe kacha amasị m bụ Fedora, mana m nwalere Elementary na nso nso a. M hụrụ slim-panel ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ n'anya n'ezie, na mgbakwunye na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dị mma. na ogwe na ha abaghi ​​uru nye onye ọ bula. ha enweghịkwa ọnya ọgụgụ isi. Eji m mmanya, remm, na ole mmemme m hụrụ na ọ dịghị ihe dịka ọnụ. abaghị uru ikwu banyere ele ihe anya. A ka nwere ike itinye aka na nhazi nke ngwa Linux, nwekwuo obere ọrụ na arụmọrụ, ọ bụ ya mere m ji chee Elementary, n'agbanyeghị na ọ bụ kernel ochie, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ya. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ dabere na fedora ọ ga-adị mma. site na ihe m nwalere na fedora 20, opekata mpe ndị gnome nọ na akara aka nri na-ewepu ogwe na ịbawanye ohere.
ma ọ dịkarịa ala ugbu a, anyị na-ewepụta teknụzụ ọhụrụ na nke nta nke nta anyị na-ejikọ sava linux ndị ọzọ, mana ọga m nwere mmasị ubuntu na centos m ebe ahụ ka mkparịta ụka ahụ na-amalite. n'oge a enwere ọtụtụ ndị otu na Centos 😉
Banyere isiokwu ahụ, echere m na ọ kwesịrị ịbụ ihe ezi uche dị na ya, onye na-eji ihe kachasị mma ma dị njikere.
Nwa, ahụrụ m gị n'anya, mana amaghị m ihe mmụọ mmụọ ịchọrọ iji post a.
Anyị emetụlarị na isiokwu nke ịdị mma na DL wee pụta na nke a ... Kedu ihe mere? I dere ma zipu ya iche YOLO? Adighi anya, mba ¬¬
Hahahahaha! .. .. i mere m ihe ochi .. xD
Ọfọn, anaghị m eji ma ọ bụ nwee Windows, naanị m nwere Linux na OS X 😛
POSIxero ruo ọnwụ.
Echere m na isi ihe bụ izuike ma jiri ihe dị mma maka gị. M na-eji Gnu / Linux maka ihe ọ bụla ma e wezụga egwuregwu vidiyo n'ihi na ọ bụ ezie na uzuoku na ọtụtụ egwuregwu akwagala, nkwado maka AMD na Nvidia ka bụ lousy.
Echere m na isi ihe abụghị ịbụ onye na-akwado ma na-eti onwe gị ihe n'ihi na mmadụ na-eji akara aha ma ọ bụ na ọ bụghị.
Tụnyere "posts" dị ka nke a, etinye m ya na nhota maka na ọ bụ okwu bekee, ị kwesịrị itinye echiche echiche n'ihu ya, maka na ọ bụ ihe ị dere ugbu a.
N'ọnọdụ ọ bụla m kwenyere na gị, abụ m antilinux na desktọọpụ, ị maara na ọ na-amasị m iji ya na sava na ihe ndị yiri ya, mana na desktọọpụ m kpọrọ ya asị, ma ọ bụrụ na achọrọ m ihe na sistemụ arụmọrụ ahụ naanị m na-agba ya na a mebere igwe, m na-ekwu, niile ọrụ ndị na-eme mkpesa na ọ bụrụ na Windows ma ọ bụ na ọ bụghị Windows gịnị na-eme otu ihe ahụ? Na ngụkọta ọ dịghị onye nwere nsogbu na-eme ya, nri?
Ezi obi Cocolio, ekwetaghị m, echere m na na ndụ gị ị hụla desktọọpụ a na-akụzi nke ọma, ihe na-eme bụ na ndị mmadụ na-ahụ ịdị n'otu na gnome, ha enweghị mmasị na ha na ha na-ekwu na Linux adịghị mma na desktọọpụ. ! Ga-ahụ Openbox ma ọ bụ Enlightenment na-ege ntị! Ugbu a, m na-eji Openbox, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile m na-eme na mkpirisi keyboard, enwere m akwụkwọ ahụaja Linux na conky, na n'ọdịnihu m nwere ike itinye ụgbọ / mmanya ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Nwanne, i chere na m na-ekwu maka ntughari? hahaha mba mgbe, akụ…. Ọ dị m ka ịdị n'otu kachasị njọ n'ụwa, cinnamon na nwunye gbajiri desktọpụ nke dị mma karịa Gnome, nke bụ nke m jiri n'ihi na ọ dị ka ọ nwere ike ịhazi ya na enweghị akwụkwọ Windows dị ọnụ ala. ), Enweela m nnukwu ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri, conky, desktọ na ogologo wdg.
Gịnị kpatara o ji a suụ n'elu tebụl? Otu, ọkachasị ndị ọkwọ ụgbọ ala na-asọ oyi, ọ bụghị ikwu ụdị nsụgharị ndị ahụ mebiri emebi n'ezie, mgbe ahụ ọ dị mma ịme mmelite na ndị ọzọ bụ ezigbo isi ọwụwa, eziokwu bụ na enweghị m ike ịnagide ya, ọ bụ ya mere m ji ahọrọ iji Windows, M enweghị usoro maka ọtụtụ afọ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma nye m, enweghị ike ime mkpesa.
1. Agbaghara m azịza gị kwuru na nzaghachi isi post
2. Nsogbu na-emelite? Amaghị m gbasara gị, mana maka m ihe kachasị mma na ụwa nke linux bụ nke ahụ bụ, na-emelite ihe, ọ bụ kernel ma ọ bụ gburugburu desktọọpụ. Ekwesighi m ịbudata mmemme ọ bụla iche na mmelite, nke dị na windo nwere ike iburu gị ogologo ehihie na-agwụ ike. Ọ bụrụ na ị na-ezo aka na ndị ọkwọ ụgbọ ala gbasara mmelite, dịka ọmụmaatụ m na-eji ndị ọhụụ nwere ihe ngosi nvidia site na oge Pleistocene na enwebeghị m nsogbu na-emelite ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ, anaghị m aghọta nke ọma ihe ị na-eche site na ihe iji melite
Agbanyeghị, ekwenyere m na ndị ọkwọ ụgbọ ala n'efu nwere ụkọ ụfọdụ, mana ị na-eche na ndị ọkwọ ụgbọ ala sitere na ụlọ ọrụ ndị maara eserese ha dịka azụ nke aka ha, mana inye ihe atụ, ọhụụ jisiri ike mee onye ọkwọ ụgbọ ala maka eserese na-eme injinịa azụ na kaadị, nke na-ewe ọtụtụ ọrụ. Ọ dị ka a ga - asị na echi m ga - echepụta teknụzụ a na - akpọ TOT (Teknụzụ Obfused Technology), ọ bụ nke zuru oke, na m na - eme mkpesa banyere ndị ọzọ enwere onwe ha n'ihi na ha anaghị adaba na ngwaike nke TOT na - eji, na - echeghị na ha hapụrụ ndụ ha ime laa azu injinia on Ngwa na TOT dee ederede efu ...
N'uche m dị umeala n'obi, post a anaghị enye ezigbo aka. Echefula na ndị ọrụ nke OS na-enweghị aha bụ (anyị bụ ndị ọrụ) eji eji. Ihe aga eme bu na agbamume ka ndi mmadu jiri GNU / Linux (ma obu ihe obula anyi kporo ya) otu ha nwere ike. Iji sọftụwia nwere ya ekwesịghị ịbụ ihe nlelị, ọ dị m ka.
Ndị ọrụ nwere ụkpụrụ abụọ adịla ogologo oge ma ga-adịkwa ... enweghị ike ịmepụta ọkwa nke ụdị a, ha na-eje ozi dị ka nri maka trolls
O di nwute, enweghị m ike ịfefe ihe mgbochi ọfịs, ọkachasị na-arụ ọrụ, n'ihi na site n'oge ahụ gaa n'ihu, ị gaghị emegide nke ugbu a, m gbalịrị ịchọta akwụkwọ ntuziaka iji LibreOffice mana enweghị m ike ịchọta akwụkwọ ntuziaka na Spanish (ikekwe enwere akwụkwọ ntuziaka zuru ezu) Anụchaghị m ya), mana oge a nke asụsụ anaghị m eme nkatọ n'ihi na ọ bụrụ na ị na-azọrọ n'ihi na ihe adịghị adị, ị ga-emerịrị ya, oge.
N’ime ụwa niile nke teknụzụ a, m na-eche na ọ baghị uru ịkatọ na ịkatọ Windows, onye ọ bụla kwesịrị iji ihe ọ bụla masịrị ya, ikekwe GNU Pro ga-akpọ m ọkụ n’elu osisi mana enweghị m akọ na uche na iji akụrụngwa ikike, ọ bụ ezie na ụwa a ga-aka mma ma a sị na ihe niile nwere onwe. M na-eji GNU / Linux n'ihi na ọ masịrị m, ọ bụghị n'ihi na ọ bụ n'efu, ọ na-adịkwa m mma karịa na Linux karịa na Windows, mana ruo mgbe Linux enweghị ohere na Desktọpụ ọ ga-abụ ụzọ dị mma na nke a.
Ahụla m nsogbu na LibreOffice taa na ndakọrịta nke doc ma ọ bụ usoro docx nke W., echere m na ọ bụ nsogbu na-enweghị ọtụtụ nrụpụta, mana ihe ọzọ bụ ịhapụ doc na docx faịlụ (ị nwere ike ikwenye iziga faịlụ PDF ma ọ bụ lee ha anya na ndakọrịta na LibreOffice). Ọ bụrụ na ha agwa gị ka izipu Okwu gị, ọ dị mfe ịgakwuru ndị mmadụ wee gwa ha na ị naghị ejikwa ngwanrọ ahụ, na ị mepụtara ha iche iche wee nyefee ha PDF (ma ọ bụ doc dị mfe na obere nhazi ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ bụghị dị ezigbo mkpa). Ọ bụrụ na ị ga - eji ya wee kọọ akụkọ nke gị ma nyefee ya na PDF, echere m na nsogbu ekwesịghị ịdị na iji ya ma a ga - enwe ihe karịrị otu akwụkwọ ntuziaka ebe ahụ (ọ nwere oke enyemaka zuru oke).
Ọ bụghị n'ihi na ị bụ otu, ma n'oge a, ị mere ọkụ nke ga-adọta uche ndị trolls ahụ.
Site na mbido m kwuru na m na-eji Windows Vista SP2 Dual-boot na Debian Wheezy, na na ọtụtụ oge m na-eji akụkụ Debian wee mee ka m nwee ike ịnabata mkpa m na enweghị m nsogbu na arụmọrụ. N'akụkụ Windows, anaghị m arụ ọrụ ya iji nwee ọ Netflixụ Netflix ma rụọ ọrụ na ngwaọrụ ndị nwere ikike dịka Adobe suite, CorelDraw, Office 2010 mgbe LO na Kingsoft Office enweghị ike imeghe CV m n'ụzọ dị mma, nke bụ akwụkwọ OOXML ederede na nnukwu, na egwuregwu F2P nke oge ụfọdụ na-enweghị ọdụ ụgbọ mmiri Linux. N'ụzọ na-emegide onwe ya, enwere oge ole na ole m tụgharịrị na Windows na PC m ma ọtụtụ oge m kwụsịrị na PC ndị ọzọ maka ọmụmụ ihe na / ma ọ bụ ọrụ.
Agbanyeghi na Ubuntu kwuputala GNU / Linux, ekwesiri icheta na ekele na onu ogugu ndi Ubuntu na-abawanye, enweela mmụba n'ọdụ ụgbọ mmiri nke sọftụwia nke Linux na ọbụna Valve kpebiri ịkwado Linux. Na Steam platform na Andamiro, kemgbe 1999, na-eji Linux na egwuregwu egwuregwu ya.
Ka o sina dị, ọ ga-amasị m na e bipụtara akwụkwọ a na nnọkọ a, ebe ọ bụ na ebe a okwu nke Dual Boot ka bụ njide.
Naanị ihe m ga-ekwu bụ: ụwa adịghị oji ma ọ bụ na-acha ọcha kama ọ na-adị iche iche.
Amaara m na pandev92 dị otú ahụ, ọ bụ naanị na ịntanetị ka ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya ma bulie esemokwu ma na-agbanyeghị na ọ na-etinye aka na ụwa nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwado ndị ajọ mmụọ ndị kwesịrị ka satan gbaa ha ọkụ dịka ndị nke PP ndị kpọrọ asị 90% site na Spain, mana n'ezie, nke a bụ blog na riffraff bụ n'efu, yabụ ị ga-ahapụ ka o kwuo okwu.
anya na gbụsara ọnụ mmiri .. http://imgur.com/Rgmd5UY
emesapụ echiche! = emeghe uche
Echere m na o kwenyesiri ike na ọpụpụ mana anyị ahụlarị na enweghị linux ma ọ bụ bsd ma ọ bụ na ọ na-eme nke ọma xD
D: Achọputara akara m chọrọ iji nke ọma xD, ma bsd ma ọ bụ (ọ bụ nke a: tinye ọrụ izizi gị ebe a)
LOL? Kedu ihe nke ahụ metụtara na post? na o kwenyere na imeghe emeghe emeghị ya ka ọ na-eje ije dịka ụfọdụ na-agwa ya ka ọ ghara iji Windows ma na-ekwu okwu banyere ya. Oge zuru ezu, laghachi na batcave xd.
Ọ dị m ka ọ bụrụ na post a anaghị egosipụta esemokwu anyị nwere ike ibi kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike gwụrụ ịga akwụkwọ ma ọ bụ ịga ọrụ, achọpụta na m nwere ike ịmụtakwu ma ọ bụ nwee ike ịbawanye uru na mpaghara ọzọ. Agbanyeghị, nke ahụ na-eleghara eziokwu anyị nọ na ya anya ma ọ nwere ike isiri anyị ike iwepụ nke ahụ na ndụ anyị ma were ụzọ ndị ọzọ. Ikekwe ole na ole (site ugbu a gaa n'ihu, ndị nwere ihe ùgwù) ga-ewere ọkọlọtọ ma wụba n'ime ọdọ mmiri onye na-amaghị ma ọ nwere mmiri ma ọ bụ na ọ nweghị.
Ichefu, pandev92, na enwere ndị ọrụ gọọmentị n'ebe ọrụ ha nke na-eme ka iji sọftụwia na-enweghị ike agaghị ekwe omume yana njirimara teknụzụ ndị ọzọ na-eme ka ojiji ọ gaghị ekwe omume. Ihe omuma atu doro anya bu ojiji nke CAD. Rịba ama na ndị mmepe nke sọftụwia n'efu maka CAD na-agwa gị na ngwanrọ ha etozubeghị iji rụọ ọrụ ziri ezi (ọ bụ ihe gbasara ịhụ ihe kpatara FreeCAD, otu n'ime ọrụ CAD ndị mara mma na sọftụwia n'efu, ka nọ na ngalaba ya 0 .x, n'agbanyeghị ọtụtụ afọ [onye ahụ dị ọcha nwere ike ịchọta nkọwa na ikikere OpenCascade, akụkụ bụ isi nke mmemme ahụ]).
N'ime ọrụ nyocha teknụzụ metụtara m, ọ dị mkpa iji chee nsonaazụ dị iche iche na steeti, nke na-anakwere nsonaazụ sitere na mmemme nke ikike (na enweghị sọftụwia n'efu nke nwere ike ịme ya) Mepụta otu n'ime softwares ndị a bụ nnukwu ọrụ, mana kwenye m na anyị na-ebugharị adepts nke ngwanrọ n'efu iji mepụta ụzọ ọzọ.
Na mgbakwunye, ọtụtụ oge na-arụ ọrụ a na-amanye gị ịnweta akụrụngwa ahọrọ, ọ dịghị ihe dịka ịwụnye sistemụ arụmọrụ gị ma ị nwere ike ịrụ ọrụ. Ọ bụ ihe dị mgbagwoju anya karịa nke ahụ. Dị ka ọ dị m, a na-eme ọtụtụ usoro maka Windows ma ọ nweghị ụzọ ọzọ maka sistemụ arụmọrụ ọzọ. Nke ahụ dị mfe
N'ikpeazụ, ị chefuru ịkọ na ọtụtụ gọọmentị (99,5%?) Jiri sọftụwia dị ka nke ọkọlọtọ, yabụ ihe ị ga-ewepụta ga-adị n'ụdị ha rịọrọ. N'ụzọ dị otú a, ha na-amanye gị na usoro ụfọdụ ịzụta sọftụwia nwegasịrị (ma ọ bụ ihe nkwekọrịta ya dị ka asambodo dijitalụ), na-enweghị nhọrọ ịwụnye ha na ikpo okwu n'efu.
Maka nke a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọ dị m ka nkwupụta ọrụ abụghị ihe ngọpụ, ebe ọ bụ na ọ dị nwute na anyị ga-arụ ọrụ iji nwee ike ịnweta ego iji nwee ike ịda mba na-enweghị okomoko. Achọpụtara m na nyocha gị nke oge a dara ogbenye ma enwere m olileanya na gị na ndị ọrụ ndị ọzọ na-amaghị ọrụ akụkụ ahụ na-enwekwu ihe kpatara etu ụwa si eme n'ezie.
Ọbụna iji sọftụwia nwere nke onwe, ọ dị m ka ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ ọrụ echiche nke ịkwaga na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ (ahụrụ m eleghi anya na nnukwu ụlọ ọrụ). Dịka ọmụmaatụ, na ụlọ ọrụ ebe m na-arụ ọrụ, echere m na anyị bụ naanị ụlọ ọrụ (na-atụ anya na ọ bụghị otú ahụ) na mba a nke ga-ezigara steeti ya akụkọ site na akụkọ (na PDF) nke LaTeX mepụtara, na-eji Inkscape, Python, mmemme sayensị. na Eke Ọgba na edemede nke aka ya.
Ekwenyesiri m ike na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ ngwa ọrụ dị ike, mana anyị agaghị eleghara nnukwu ọrụ nke ụlọ ọrụ na-akwado sọftụwia nke anya nwere uru dị n'ọhịa dị iche iche, mana enwere olile anya ụbọchị ha agụọla.
Windows anaghị amasị m, anaghị m achọ iji ya eme ihe, mana mgbe m ga-eme ya, ọ nweghị nhọrọ ọzọ. Ebumnuche bụ ịme ka echiche ahụ dị na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ bụla ga - ebi na ụwa ka mma karịa. N'ụzọ dị otú a, ị maara nsogbu ahụ, n'oge na-adịghị anya, ị ga-enupụ isi iji gaa n'ihu ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịhapụ kpamkpam nke ọzọ na-adịghị eme gị obi ụtọ.
Nye onye a onyinye.
Enweghị m ike ịnye gị laiks; (
Ọfọn, amaara m na nke a abụghị Disqus, mana opekata mpe usoro ịza ajụjụ a anaghị adịkarị egwu.
Ọ bụ nke kachasị nzuzu m hụtụrụla, mgbe mmeghachi omume nke nwa akwụkwọ ọzọ nke sistemụ na-eti mkpu megide winbug na-enweghị onye ọ bụla na-agwa ya ihe ọ bụla. Ọ bụ nzuzu n'ihi na ọbụlagodi na ị chere na a ga-enwe ndị na-eji winbug ọ bụghị maka obi ụtọ n'onwe ya, ọ bụghị n'ihi na m masịrị iji winbug mana ntụpọ 1. Dị ka ọ dị na sistemụ ị ga-amarịrị ma mara otu esi eji ihe niile ma ọ bụ ọtụtụ OS dị ugbu a, ugbu a, isi nke ọzọ 2 ga - abụ onye egwuregwu siri ike, n'agbanyeghị na achọgharịrị m onwe m ụzọ m ga - esi nwee ike igwu agha 4 na ọtụtụ utu aha ọhụrụ. nke Egwuregwu vidiyo enweghị ike iji, ọ bụ uto nke ejikọtara na ajọ ihe ọjọọ bụ winbug, yabụ gị »ma ọ bụrụ na ịnweghị nsogbu ndị a ma ọ bụ mkpa 2, ekwula okwu maka ndị ọzọ na-arụ ụka na-enweghị isi n'amaghị ezi ọnọdụ nke onye ọ bụla. Ya mere ana m eji winbug mana anaghị m akwado ya ma ana m akwado iji linux! n'ihi gịnị? n'ihi na ọ dị m mma.
Ndị ị kpọrọ aha bụ ndị ụgha na ị maara okwu ochie a na-ewu ewu: "A na-achọpụta onye ụgha ngwa ngwa karịa nwoke ngwọrọ."
Aghọtaghị m ihe kpatara mmadụ ga-eji zụta Apple na Microsoft ma ọ bụ Microsoft wee sị na ọ bụ hel, otu n'ime mmadụ abụọ ma ọ bụ nwee nsogbu ma ọ bụ nwee nzuzu (ọ dị nwute na enwere ọtụtụ ndị nke ikpeazụ).
Enweela m android x86 na PC lol 😛
Ugbu a na-ekwu maka ihe dị mkpa. Echere m na ọ bụ isiokwu dị mma mana ọ bụghị ebe dị mma iji kpaa ya. Ka anyị cheta ihe e kere DesdeLinux maka: nyere ndị ọhụrụ aka ka ha ghara ịta ahụhụ mgbe ị na-etinye gentoo ... Ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ọ bụ ya mere eji akpọ ya opensource philosophy, ị na-eche mgbe niile banyere ya ma ị na-anwa itinye ya n'ọrụ na ndụ gị.
M na-eji Linux maka ihe niile. na ee ọ bụ eziokwu na m hapụrụ na ọchịchọ na-egwu xd!.
Ihe na - eme bụ na onye ode akwụkwọ ahụ dabara n’ihe ọjọọ nke ikwusa ozi ọma sistemu, ihe ọtụtụ ndị ọrụ ibe m na - agaghị emeli ma ọ bụ enweghị ike ime n’ihe gbasara ịbụ injinịa sistemu. Ọbụna aha jọgburu onwe ya chọrọ ka m mara maka sistemụ, nke ọzọ bụ na m na-egwu egwu egwuregwu vidiyo na-adịbeghị anya…. ihe ị ga - akuzi bụ ịkwụsị ikwusa ozi ọma na - akwalite ya mana ọ pụtaghị na ị naghị eji ma ọ bụ enweghị ike iji ma ọ bụ na ị maghị etu esi eji ndị ọzọ. OZI! site na ode akwukwo.
Ezie, enwere m obi eziokwu; GNU / Linux na-amasị m na m na-eji ya ọtụtụ, mana site na ihe m mụrụ (Graphic Design) Ekwesịrị m iji sọftụwia Adobe nwere ikike, enwere m ike ịmụ iji mmemme mmemme n'efu dịka INkscape ma ọ bụ GIMP mana eziokwu bụ na anọ m umengwụ ịmụta iji ha, mana anaghị m agọnahụ na m na-eji windo, achọghị m ya, mana ọ bụ nke m. Ekele!
Ezigbo akụkọ, enyi m. Akụkọ mere eme.
Site n'ụzọ, ruo mgbe GIMP, Inkscape na Scribus adịghị esonye n'ike iji kwalite ojiji ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ?
Eziokwu bu, anyi nwere onwe anyi iji software mepere emepe, ego efu na ugwo. (Anaghị enweta xD mgbe niile)
Ekwenyesiri m ike n'okwu m na omume m, lee anya: [nkwupụta] Ana m ede ihe site na Windows 8.1 na ọtụtụ ngwa ndị nwere ikike yana abụọ boot na openSUSE n'ihi na achọrọ m, n'agbanyeghị na enweghị m mkpa iji ya [/ nkwupụta]
Ejibeghị m Windows ogologo oge na akwụkwụla m diski ike ebe m tinyere ya, naanị m na-ahapụ ya n'ime kọmputa m ma ọ bụrụ na achọrọ m na mberede.
Agbanyeghi ee, enwerem Office, Photoshop na League of Legends awụnyere site na Wine. Ọzọkwa, ọ bụghị sọftụwia niile nke m tinyegoro bụ n'efu, dịka ọmụmaatụ, m na-eji Steam, Opera na Maxthon, nke m na-anwale ugbu a.
"(Iegha!)" Nke ahụ bụ nnọọ ihe!
Ugbua. teamviewer bụ naanị otu onye na-echekwa na igwe m. Na maka ndekọ ahụ, ọ na-agba ọsọ na Wine xD
M na-ahụkwa mgbanwe mgbanwe na-adọrọ mmasị: ndị enyi na-amabeghị ihe ọ bụla karịa Window $ (foto ha na square ...), nwere Ubuntu ma ọ bụ Mint na Dual Boot, mana ihe kachasị mma bụ .. . na ha jiri ya!
Nwayọọ, dị nwayọ nwayọ, mana ọtụtụ Linux distros na-ahapụ obodo "adịbu" iji ruo onye ọrụ pere mpe, onye mepee ihe nchọgharị, ọfịs na egwuregwu egwuregwu oge ụfọdụ. Nke ahụ mara mma.
Zaghachi Ivan Gabriel
ọmarịcha ederede (azịza edere na windo)
N'ime ime ime m nwere ọtụtụ ọwa nke na-agbasa TV ahịhịa, ị na-ekwu na m na-a itụ ya? Na m bụ onye ihu abụọ maka ewepụghị ha?
Enwere m Windows na Linux na PC m afọ 9. Ọ bụrụ na m nwere naanị Linux, n'ụzọ doro anya na agaghị m eji Windows obere. Ana m eme ka o doo anya na ịnwe nhọrọ m masịrị site na nnọkọ na Linux.
Achọpụtara m na ọ na-ewe m iwe ịhụ etu esi esi n'otu akụkụ nke ihe windo na-akatọ n'efu na n'echetaghị ọtụtụ oge.
windo abụghị usoro ọjọọ n'onwe ya. ọ ga-abụ ihe ikikere na ihe niile mana mana dị ka sistemu desktọọpụ ọ na-enye ihe imirikiti ndị ọrụ chọrọ. bido ma gbaa ọsọ. ngụkọta iji bulite putifotos na "feisbuk" na obere ihe ọzọ ... n'ezie mgbe ahụ ka m dị ka sysadmin na-arụ ọrụ agaghị eji windo eme ihe n'ihi na ọ nweghị ngwaọrụ (n'echiche m).
Ọfọn, anaghị m ewe iwe na windo na agbanyeghị na abụ m onye ọrụ debian kwesịrị ntụkwasị obi ma nwee obi ụtọ naanị ihe karịrị otu afọ, abụ m otu n'ime ndị nwere dualboot naanị iji nwee egwuregwu ole na ole. ọ bụ ya mere m chọsiri ike ịhụ ihe steamos na-eweta na ụwa Linux.
Anyị bụ otu ihe ahụ na Debian + Windows dual-boot. Na mgbakwunye, ihu abụọ dị na ụwa POSIX bụ ọkachasị n'ihi ndị Farisii na-anụ ọkụ n'obi na-emebi ndidi anyị.
Longinos Recuero Busts dijo
Otú ahụ ka ọ dị. I kpughere ya nke ọma karịa mmiri.
Ihe ngosi gị masịrị m. Ekele na nke ahụ.
Zaghachi ka Longinos Recuero Bustos
Ekwenyere m na 100% n'echiche gị ...
Hector Kwụrụ dijo
Ya mere, ọ bụrụ na m bụ onye ọgwụ ike riri ahụ, enweghị m ike ịgwa enyi m ka ọ ghara ị drugsụ ọgwụ ọjọọ, ọbụlagodi na ọ dị njọ, n'ihi na m na-eme ya? ...
Zaghachi Hector Quispe
Ọ dị mma, ihe niile gbasara, dabere na otu ị si lee ya anya. Ana m agwa gị na m hụrụ Linux n'anya.
M na-eji Windows n'ụlọ ọrụ n'ihi na anyị agbazitela desktọpụ desktọọpụ, nke a na-ewu aha na-abịa na Windows na ndabara, mana na sava anyị na-eji Ubuntu Server ma anyị nọ na ịgbanwee Red Hat.
Companylọ ọrụ ebe m rụrụ ọrụ na mbụ bụ onye mmekọ Microsoft, yabụ ihe niile, ihe niile bụ Microsoft Windows (ee, Server 2003 ruo 2012, Sistemụ Nhazi System / Data Protection / Operations 2007 na 2012, ISA Server ma ọ bụ TMG, .NET, SQL Server, wdg). Ọ dabere na iwu Microsoft.
Echere m na n’agbanyeghi etu Linux si nọrọ, ị ghaghi ịmara teknụzụ niile, n’eziokwu ndị ọkachamara na kọmputa ga-amarịrị akụkụ abụọ nke mkpụrụ ego ahụ, n’ọtụtụ ọnọdụ anyị enweghị nhọrọ, naanị ihe onye ahịa na-enye, ọ baghị uru ịbụ genius Linux ma oburu na imaghi ihe obula banyere Windows na otu o si aru oru, na uzo ozo.
Enwere m echiche nke m banyere Windows na Windows ebighi ebi na-alụ ọgụ, mana na njedebe nke ụbọchị, ụlọ ọrụ ọ bụla na onye ọ bụla na-etinye ihe dị ha mma, ma ọ bụ ihe ha nwere ike ime, site na ebe ahụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ goro gị ọrụ, ịkwesịrị jikwaa nke ọma na ihe ha nyere gị ma gbanwee. Ahụla m Linux ka ọ na-ada na nyocha nke sistemu Windows / Microsoft na nke ọzọ
Nke ahụ bụ echiche nke ịbụ sysadmin ma ọ bụ onye nrụpụta ma ọ bụ n'ọhịa nke ị zụlitere na gburugburu ebe IT bụ IT.
Nweghị ike ịgagharị ma kwuo na naanị ị maara nke a ma ọ bụ ihe ahụ, na maka m bụ onye na-emegide ọkachamara, + 1000.
Biko nye onye na-ekwu okwu a nrite ọla edo maka echiche kacha mma banyere 2014.
GnuLinux Freedom dijo
Na ị hapụrụ ndụ abụghị eziokwu n'ezie, ọ ga-amasị m ịme ihe niile na Gnu / Linux mana ọ bụrụ na ha ekweghị ka m biri na mahadum, n'ihi na ụfọdụ ngwanrọ maka ọrụ m bụ naanị maka windo, eziokwu ahụ bụ na anyị na-eji boot abụọ anaghị eme Ọ bụ n'ihi na anyị chọrọ ma ọ bụ ikpe m abụghị nke ahụ, n'ezie anyị ga-akwalite sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ bụrụgodi na anyị ji windo, ọ bụ ọrụ anyị dị ka ụmụ amaala, ma ọ bụrụ na ịzụta mbadamba nkume na IOS ọ bụ akụkọ ọzọ dị iche, eziokwu Enwere m nkwenye siri ike na post gị mana nke ahụ bụ ihe ọ bụ.
Kwezuo. M na-ejikwa Windows, ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ oge enweghị m nhọrọ (Abụ m onye egwuregwu na-agbanwe agbanwe), ekwetakwara m na ihe kacha njọ enwere bụ Apple…. ma ebe ọ bụ na ọ "dị mma" ...
Anyị niile nwere onwe anyị ịkatọ ihe anyị chọrọ ma n'otu oge ahụ iji ihe anyị chọrọ, ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ Linux, anyị agaghị akpa agwa dị ka Windero, nke ahụ na-egosi ịghara ịmanye onye ọ bụla ma ọ bụ kpọrọ ndị mmadụ gaa ala gị.
Maka nke m n'ụlọ naanị oge m nwere buut abụọ bụ maka 2 Kubuntu (echetaghị m ụdị ọ bụla), otu n'ihi na ọ kwụsiri ike ịrụ ọrụ, egwu, wdg na nke ọzọ bụ ụdị nke nwalere ihe ọ bụrụ na m tiwara ya, ọ bara uru! Naanị ebe m na-eji Windows ma ọ bụghị nke aka m, ọ na-arụ ọrụ!
Enweghị m mmasị ịgba ọsọ megide Windows! (X na-eme ya ma ọ bụrụ naanị) M na-eji GNU / Linux maka uru niile SL na-enye m, windo na-amasị m karịa na ọtụtụ puku isi! ọ bụ ihe m na-akwado na-adịgide adịgide na-enweghị ịbụ onye na-esote onye ofufe nke SL ma ọ bụ ihe mgbochi Win.
Ọ bụrụ na m na-achọ ịdị na-agbanwe agbanwe na ndụ, n'akụkụ ọ bụla na n'ezie, dị ka ị na-ekwu, ihu abụọ abụghị naanị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, kamakwa na teknụzụ. Banyere!
Zaghachi na Roly
Ọ dị mma, onye ghọtara isiokwu ahụ, enweghị oge m kwuru ịghara iji windo, ma ọ bụ n'oge ọ bụla m kwuru na enweghị 4 ma ọ bụ 5 chọrọ ya n'ezie na ọrụ ha n'ihi na ha na-arụ ọrụ na kọmpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-ebi akwụkwọ. (na ha niile abụghị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu), mana ọ bụrụ na ị na-eji ya n'ụlọ, agala dị ka ihe ngwanrọ n'efu, n'ihi na ọ nweghị onye na-akwado ya.
nwata nwoke dijo
Imirikiti okwu ndị ahụ sitere na Windows, ndị mmadụ na-achọ naanị ebe ha ga-anọ, ha nwere ike ịsị na Linux kachasị mma mana ha na-aga n'ihu na-eji Windows ma ọ dịghị njọ, Bender ekwuola "Onye ọ bụla mere ya Achọrọ m ịbụ onye ama ama ", ọ bụ ihe nkịtị nke mmadụ, na linux bụ fashionable hehe, assholes
ma otu okwu a ka a na-emegharị ọzọ maka ndanda-NSA, SOPA na nzuzu ndị ọzọ ... ọtụtụ na-akpọ onwe ha ndị nnupụisi na ndị na-agbachitere eze na-emeghe eze na ntu ma mee ya site na OSX na Windows oO ... esemokwu ebee?
N'ikwu eziokwu, achọghị m ịma banyere isiokwu a ... Enwere m ike ịsị na onye ọ bụla bịara ịsị na ihe ngwọta nke sistemụ ahụ dị mma karịa nke m na-ejikarị emeghị ka m kwaga na nke ahụ . Ọ bụrụ na m na-atụle ọnwụ nke oge (ọbụlagodi m na-echegbu) iji ọtụtụ sistemụ arụmọrụ n'otu kọmputa ahụ. Mgbe ị na-eji ihe dịka gnu linux ị ga-ahụrịrị nsogbu ndị ị bu n'obi idozi na m, arụmọrụ na-aga n'ihu.Ekwere m na eziokwu a bụ ihe na-eme ka ọtụtụ ndị wụnye sistemụ ndị ọzọ na kọmputa ha, nke anaghị akatọ na njedebe ị nwere ike jiri ndu gi mee ihe o biakutere gi ochicho !!
M ji Linux na m na-ekweta na ya. O siri ike nnabata ya? Ọ bụrụ na ọ sitere na ihe m hụrụ na ọgbakọ ndị a, m ga-ekwu na Linux na OSX bụ sistemụ ka ukwuu ma ọ bụ ihe megidere.
Site n'ụzọ elav, "bie ma hapụ ndụ" anaghị emetụta onye kere isiokwu, nke bụ eziokwu bụ na ndị na-akatọ Windows ka "dị jụụ" mana jiri ya, na-eme ihu abụọ, ọ dị mma mgbe niile inye ihe bara uru nnyocha banyere ya. Ee ee, onye ọ bụla ga-ahapụ onye nke ọzọ ka ọ họrọ ihe ha chọrọ, mana ka anyị ghara ihu abụọ na ọtụtụ ga-achọkwa ka ndị ọrụ karịa na Linux ma ọ bụ ya mere ọtụtụ ji anwa ime ka ndị ọzọ kwenye uru nke Linux. Mụ onwe m na-eji Linux na Linux (maka ugbu a), mana ọ bụrụ na oge abịa mgbe Linux anaghị enye m ihe m chọrọ, agbanwere m gaa OS ọzọ, nke o nyere m, oge. Anyị ga-akwado OS dịka ihe onye ọrụ ndị ọzọ na-achọ na mkpa ya, ọ bụghị dị ka ihe anyị chọrọ.
Ahụrụ m na mbipụta gị magburu onwe ya! Ezigbo ederede.
Ọ bụ eziokwu banyere edemede a, mana nke ahụ mere n'ihi na, "ekwensu", na-enye ngwa ndị dị mfe iji maka ụdị omume ọ bụla, nke na-abụghị ikpe na Linux. Na Linux hazi ọtụtụ ihe ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, ị ga-agafere ọnụ ya. Enwere otu ma ọ bụ ngwa eserese ọzọ, mana ha anaghị arụ ọrụ ọfụma ma ọ bụ na ha anaghị eme ihe niile ha kwesịrị ime. Site na ho site b, ị na-agagharị na ọnụ ya. Taa, dị ka Lao na-eto eto na-ekwu taa, "ọ bụ." Hapụ okwu ahụ maka ndị na-eche dị ka ndị isi kọmputa, ndị ọrụ na-achọ ihe ọzọ, n'etiti ha, ịdị mfe na ọsọ. O nwere ihe kpatara ya, a ka ji eji "ekwensu".
Linuxbọchị Linux nyere Ngwọta EQUAL ma ọ bụ EGO, na mpaghara kọmpụta niile, "Ekwensu" ga-apụ n'anya. Mana, na ọnụego anyị na-aga, echere m na Linux agaghị adị Ekwensu kpamkpam. Why ... Amaghị m, mana ihe a niile bụ ihe iju anya. Ọtụtụ afọ nke ndụ nwere linux ma ka na-adabaghị ekwensu. M na-ekwughachi, ọ dị ka ọ bụghị ihe ijuanya. Kedu ihe dị n'ofe, gịnị na-egbochi Linux ịpịa Windows n'ezie? Aga m adị njikere ịkwụ ụgwọ ikikere maka Linux nke na-enye m otu ihe ahụ dị ka Windows, gbakwunye na omume ọma nke ọ nwerelarị, gbasara nke ikpeazụ.
Onye amụrụ Windowslerdo ga-adị otu a rue mgbe ebighi ebi. Na ihere anaghị eme ha, ha na-egosipụtakwa ya na “edemede” ha.
Ana m agbasi mbọ ike ka m ghara iji sọftụwia nwegasịrị ikike. Anaghị m eji Windows ma ọlị, mana ọ nweghị ihe dị ịrịba ama. Ihe dị ịrịba ama, ma ọ bụ ihe ziri ezi, bụ ịmekọrịta n'ezie site n'ịwelite akụkọ ahụhụ, inye onyinye, ntinye koodu, na iru otu n'ime atọ ndị a na-akwalite ya. Mara na ha bu ebum n’uche m, na ochicho m, achoghi m igwa gi na o gha adi otua.
Ihe dị mkpa bụ ka ha gbanwee.
Ndi Vyasa dijo
Nke a abụghị post… Ọ bụ otu echiche! Abụ m onye ọrụ abụọ, mana ọ bụghị maka obi ụtọ, m na-arụzi kọmputa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa m niile na-eji cherị (n'otu aka ahụ, na ịkwa emo na ihe niile). Enweghị m ike ịkwụsị ya ruo mgbe Linux bụkwa sistemu eji arụ ọrụ na desktọọpụ PC na laptọọpụ (nke m nwere olile anya ga-adị n'oge). Ka o sina dị, ọnụ ụzọ ahụ nwere mmetụta dị ukwuu! Daalụ.
Zaghachi El Vyasa
Mkpa ọ dị inwe Ndabere na ụfọdụ ngwaọrụ iji mepụta ha
Macopix: Etu ị ga-esi nwee ezigbo nwa agbọghọ na desktọọpụ gị (ArchLinux)